ASCII art: inona izany, karazana zavakanto ASCII zavakanto sy programa | Famoronana an-tserasera
Amin'ny maha mpamolavola anao dia mety ho sendra ASCII Art ianao, fantatra ihany koa amin'ny hoe kanto an-tsoratra, indraindray. Ity endrika famolavolana ity dia mampiasa sary an'ohatra hamoronana sary miaraka amin'izy ireo.
fa, Inona no atao hoe ASCII? Inona avy ireo karazana? Ahoana no hanaovana azy? Izany rehetra izany sy ny maro hafa dia inona, etsy ambany, hiadian-kevitra aminao izahay, satria ity ASCII zava-kanto ity dia hita be kokoa isan'andro isan'andro tsy araka ny eritreretinao.
1 Inona no atao hoe ASCII Art
2 Ny fototry ny kanto ASCII
3 Karazan-javakanto ASCII
3.5 Karazan-javakanto ASCII hafa
4 Ny mahasamihafa ny zavakanto ASCII sy ny kanto ANSII
5 Ahoana ny fomba famoronana sary kanto ASCII
5.1 Fanilo Soft ASCII Art Studio
5.5 Ahoana ny famoronana kanto ASCII amin'ny Word
Inona no atao hoe ASCII Art
Ny zavakanto ASCII dia avy amin'ny kaody ASCII. Momba ny a Kaody amerikana (ho an'ny fanafohezana ny, American Standard Code for Information Interchange) izay ampitaina amin'ny endritsoratra iray izay mifanakalo fampahalalana. Raha atao teny hafa dia miresaka fitaovana toa abidia isika. Ity kaody ity dia nanomboka nampiasaina tamin'ny fampiasana telegrafy.
Manokana, tsy maintsy jerentsika i Bell, izay nikasa ny hampiasa kaody enina kely amin'ny alàlan'ny fampidirana ny mari-piatoana sy ny litera kely amin'ny kaody efa nampiasain'izy ireo, ny an'i Baudot's. Na izany aza dia nanjary ampahany tamin'ny komity kely an'ny American Standards Agency (ASA) izy avy eo ary namorona ASCII.
Ny kaody voalohany nipoitra voalohany dia tamin'ny 1963, izay nahitana zana-tsipika miakatra ho solon'ny fiveflex (^), raha ny zana-tsipika ambany kosa napetraka ho solon'ny eo ambany.
Nandritra ny taona maro dia niova ireo marika maromaro. Amin'izao fotoana izao, ny ANSI x3.4-1986 no mitantana (na dia nisy fanovana aza tamin'ny 1991 izay tsy nanova ny kaody ASCII mihitsy.
Raha ny tena izy, ny kaody ASCII dia sarotra kokoa noho ny ASCII zava-kanto, satria fifehezana vitsy an'isa ihany io izay tompon'andraikitra amin'ny famoronana sary miorina amin'ny tarehintsoratra ASCII azo pirinty. Ny valiny dia tena mitovy amin'ny zavatra azo tratrarina miaraka amin'ny teknikan'ny pointillism, miaraka amin'ny fomba fijery tsara kokoa raha toa ka lavitra ny fahitana ny sary fa tsy ny akaiky.
Nanjary nalaza be io maneho sary ary amin'izao fotoana izao dia misy programa marobe mamela anao hamorona an'ity karazana sary ity, ary koa ny horonan-tsary.
Ny fototry ny kanto ASCII
Ny zavakanto ASCII dia miorina amin'ny kaody manokana, ilay antsoina hoe kaody ASCII. Ary ny toetra tsirairay, ny litera iray, ny manokana ... dia azo soloina miaraka amin'ireo isa manomboka amin'ny 00 ka hatramin'ny 255. Raha ny tena izy, raha te hahalala azy rehetra ianao dia mamela tranokala iray ahafahanao mahita mahita azy rehetra.
Ny kaody 7-bit fototra dia milaza izao manaraka izao:
Ny 0 ka hatramin'ny 31 dia tsy ampiasaina amin'ny endri-tsoratra, fa an'ny «fanaraha-maso».
Ny 65 ka hatramin'ny 90 dia sora-baventy.
Manomboka amin'ny 97 ka hatramin'ny 122 dia hisy litera kely.
Rehefa nandeha ny fotoana dia nivoatra ny zavakanto ASCII ary nipoitra ny karazana zavakanto isan-karazany, toy ireto manaraka ireto:
Linear ASCII art dia iray amin'izany, fa tsy mampiasa kaody isa, ny ataony dia ny mampiasa tsipika, indraindray mahia, indraindray tototry, indraindray misy bara sy teboka ...
Mety tsara amin'ny fanaovana sary tena tsotra sy kely izy io satria, ny lehibe kokoa dia mety tsy ho hitany manontolo.
Amin'ity tranga ity, Raha tokony hofongariny ny aloky ny sary, ny ataony dia «fandokoana azy», fa mampiasa kaody ho an'ity. Izy io dia miasa tsara ho an'ny sary antonony sy lehibe, na dia kely aza, raha mbola tsotra sy mora izy ireo, dia azo ampiasaina ihany koa.
Grayscale mampiasa fototra mitovy amin'ny etsy ambony, kanto ASCII mafy orina. Na izany aza, mampiasa tarehin-tsoratra samy hafa izy ireo, tsy amin'ny kaody ihany fa amin'ny loko kaody koa, hamaritana ireo sary misy aloka. Noho izany, izy no mety indrindra amin'ny fanaovana sary tarehy miaraka aminy.
Ity teknika ity no sarotra indrindra, na dia mahavariana kokoa aza ny valiny.
Ity karazana zavakanto ASCII ity dia tsy dia fantatra loatra. Ary misy ihany koa io. Afaka mahita porofon'izany ianao ao amin'ny Alice in Wonderland boky. Safidy iray hafa ny famoronana tononkalo na lahatsoratra, raha jerena lavitra, dia afaka maneho biby na zavatra iray.
Raha ny marina dia misy tranokala sasantsasany ahafahanao mahatratra an'io vokatra io amin'ny alàlan'ny fametrahana teny na andian-teny iray.
Karazan-javakanto ASCII hafa
Tsy azontsika hadino ny manonona zavakanto ASCII hafa, ny ankamaroan'izy ireo dia miovaova na mitambatra amin'ireo taloha.
Ny mahasamihafa ny zavakanto ASCII sy ny kanto ANSII
Iray amin'ireo lesoka lehibe nataon'ny olona ny fieritreretana fa mitovy ny zavakanto ASCII sy ny kanto ANSII. Saingy tsy marina izany.
Raha ny marina, ASCII no voalohany, niavian'ny ANSII, izay mamela ny fampiasana tarehintsoratra misimisy kokoa (an'ireo an'ny MS-DOS) ary maro loko hafa (hatramin'ny 16 loko).
Ahoana ny fomba famoronana sary kanto ASCII
Ny sary ASCII dia azo foronina amin'ny alàlan'ny kaody ASCII fa koa amin'ny fampiasana tarehintsoratra hafa na emotika. Raha ny marina dia azonao atao ny mamorona azy io, na miaraka amina mpanonta sary na mpanonta lahatsoratra. Mba hanaovana izany dia azonao atao ny mampiasa ny endri-tsoratra ny fitendry, mety tsara amin'ny famoronana silhouette isa.
Safidy iray hafa ny fampiasana Unicode endri-tsoratra manokana, izay manome anjara biriky bebe kokoa amin'ny valiny.
Mikasika ireo programa dia afaka misafidy safidy isan-karazany ianao, ohatra:
Fanilo Soft ASCII Art Studio
Tonian-dahatsoratra amin'ny famoronana zavakanto ASCII tsotra ity. Hainy mihitsy aza ny manova sary amin'ity zavakanto ity.
Raha toa ka tonian-dahatsoratra mampiasa ity teknika ity no tadiavinao dia mila manandrana an'ity programa ity ianao. Maimaimpoana, toy ilay teo aloha, ary tsy hibodo anao be loatra.
Ny programa sahaza ho an'ny avadiho ho lasa litera sy teny ny sary. Azonao atao ihany koa ny mamorona mozika amin'ny teknika ity.
Fandaharana iray hafa izay azonay atao ny manolotra ny sary ho lasa zavakanto ASCII.
Ahoana ny famoronana kanto ASCII amin'ny Word
Raha manana Word, OpenOffice, LibreOffice na mitovy amin'izany ianao, dia azonao atao ny mamorona endrika miaraka amin'ity kaody ity. Ankehitriny, tsy maintsy jerenao ny lafin-javatra sasany:
Misafidiana endri-tsoratra tsara. Amin'ity tranga ity dia mamporisika anao izahay hifidy amin'ny Times New Roman, Georgia, Arial, Verdana, Comic Sans, Tahoma ...
Raha hampiasa endri-tsoratra manokana ianao dia mila mampiasa endri-tsoratra izay tena manana azy rehetra, toa an'i Arial na Calibri.
Ireto misy ohatra sasany amin'ny valiny azonao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » dia midika hoe » sary » ASCII zavakanto